Socket PPR ဂဟေစက်
သက်ဆိုင်သော Range အိတ်ဆောင် socket fusion tools များကို PP-R, PE, PERT, PB pipe နှင့် fittings များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကောင်းကျိုးများ >> ထူးခြားသောဒီဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်သည်မတူညီသောပစ္စည်းများအရ၊ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာအပူချိန်ကိုထိန်းညှိနိုင်သည်။ >> ဘက်ပေါင်းစုံလမ်းညွှန်များတွင်ဂဟေဆော်နိုင်သောဖြုတ်တပ်နိုင်သောထောက်တိုင်တစ်ခု။ >> အသုံးပြုရန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေဆက်ကပ်အပ်နှံလိမ်ဖဲ့ခြင်းအစုတခု။ >> အီလက်ထရောနစ်အသိဉာဏ်ရှိသည့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်အပူပေးလျော်မှုကိုသိနိုင်သည်။ >> အပူကြားကာလ ...
HDPE Butt Fusion တပ်ဆင်
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်စာရွက် - Professional pipe ဖြတ်စက်၊ ပိုမိုတိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောအလုပ်။ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ စက်တစ်ခုလုံး၏အလေးချိန်သည် ၇.၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ 220 မော်ဒယ်သည်အချင်း ၁၅ မီလီမီတာမှ ၂၂၂ မီလီမီတာအကြားရှိပိုက်များကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ သံမဏိပိုက်၏နံရံအထူမှာ ၈ မီလီမီတာ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ၏အထူမှာ ၁၂ မီလီမီတာ၊ သံမဏိအထူ ၆ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်းဆူညံသံနှင့်အဘယ်သူမျှမမီးပွားမရှိပါ။ ဖြတ်တောက်သောမျက်နှာပြင်သည် burrs မပါဘဲချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သဖြင့်၊
Technical Data Sheet: Model: SDJ3400 Voltage: 220V Extruding Motor Power: 1300W Metabo Hot Air Power: 3400W Lesiter ဂဟေဆော်သောလှံတံအပူပါဝါ: 800W Extruding Volume: 2.5kg / h ဂဟေဆော်လှံတံအချင်း: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm ရှိနိုင်ပါသည် PP, PVDF နှင့်အခြားပူသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းများကိုပလပ်စတစ်ရေတိုင်ကီများ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ၊ ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများနှင့်ပလတ်စတစ်အိတ်များကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောလက် extruder သေနတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ Model SDJ3400 ဗို့အား 220V ± 5% Frequency 50 / 60Hz Hot Air Blower ...
Geomembrane ဂဟေဆော် SUDG800
လျှောက်လွှာနှင့်အသွင်အပြင်ပုံစံ: SUDG800 ဗို့အား: 220V / 110V ပါဝါ: 800W / 1000W ကြိမ်နှုန်း: 50 / 60Hz ဂဟေဆော်သောပစ္စည်း: PE / PP / PVC / EVA / ECB ဂဟေဆော်သောပစ္စည်းထူ ness 0.2mm-1.5mm ဆီလီကွန်ဖိအား roller နှင့်သံမဏိဖိအား roller များမှာ မလုပ်မနေရ။ ကြေးနီပူသပ်နှင့်သံမဏိပူသပ် optional ရှိပါတယ်။ နှစ်ထပ်ပူသပ်ပုံမှန်နှင့်တစ်ခုတည်းပူသပ် optional ကို။ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်စာရွက် - Model SUDG800 ဖော်ပြချက် Geomembrane ဂဟေဆော်စက်ဗို့အား 220V (စိတ်ကြိုက်လက်ခံနိုင်သော) ကြိမ်နှုန်း 50 / 60hz Power 8 ...
အသုံးပြုခြင်းနှင့် Feature Electrofusion ဂဟေဆော်စက်သည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေပေးဝေရေးအတွက်အသုံးပြုသော PE ပိုက်နှင့် fittings ကို coupling နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင့်တော်သည်။ 1. ဒီဇိုင်းနှင့် ISO12176 Electro-Fusion ဂဟေဆော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းအရသိရသည်။ ၂.High level MCU ကို control core အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ LCD display တပ်ဆင်ထားသည်။ ဂဟေဆော်ခြင်း parameters အားလုံးကိုပြသနိုင်သည်။ 3.Light အလေးချိန်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး။ 4. အချိန်မှန်စောင့်ကြည့်ခြင်းဂဟေအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဂဟေဆော်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအဆုံးသတ်နိုင်သည်။ ၅။ တည်ဆောက်သည်။
အသုံးပြုခြင်းနှင့် Feature ၁။ ဂဟေအမျိုးအစား - အလျားလိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပိုက်ခြင်း။ PLC touch-panel control system သည်အပူချိန်၊ အချိန်နှင့်ဖိအားကိုပြုပြင်ခြင်းအောက်ရှိပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအလိုအလျောက်ညှိပေးနိုင်သည်။ ၂.Control စနစ် Siemens PLC၊ ၇ လက်မအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် - Siemens ။ 3.Brand အသစ်ထည့်သွင်းထားသော frame, အလွန်စိတ်ချရသောထုတ်လွှင့်မှုယန္တရား, အလုပ်တည်ငြိမ်နှင့် pe အတွက်သာလွန် ...